Edere site Tranquillus | Feb 22, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Mgbe ị gabigasịrị ụdị ụdị ezumike dị iche iche ị nwere ike ịnwe ya. Oge ezumike bụ ngwaọrụ nke yiri ihe kachasị gị mkpa n'ọnọdụ ọnọdụ gị. Nke a bụ ọmụmaatụ nke leta iji ziga ndị were gị n'ọrụ ọkacha mma site na iji nkwenye nnata iji zere ndịiche na-enweghị isi. O kwere omume na nkwekọrịta mkpokọta gị ma ọ bụ nkwekọrịta gị n'ime igbe gị kwupụtara usoro ịmebere oge. N'ime ọnọdụ ndị a, nzipu ozi ga-egosi afọ ịrịọ gị.
Ihe atụ dị njikere iji maka arịrịọ maka ịhapụ akwụ akwụghị ụgwọ.
Isi aha ikpeazụ Aha mbụ
Aha nna na aha mbụ ma ọ bụ aha azụmahịa nke nnata
Akwụkwọ ozi edebanyere aha ya na A / R
ihe : Rịọ maka ezumike n’akwụghị ụgwọ
Enwere m nsọpụrụ ịrịọ maka ezumike n’akwụghị ụgwọ maka oge (ọnụ ọgụgụ ụbọchị). Ọ bụrụ na ịnweghị ihe mgbochi, ọ ga-amasị m ịhapụ ọrụ m ịmalite (hapụ mmalite ụbọchị) ịkwụsị na (dee ụbọchị ezumike ikpeazụ).
Onye were gị n’ọrụ n’ụlọ ọrụ gị ka (dee mpempe ọkwa n'ọnọdụ ejiri) si (nye bido nmalite ọrụ n’ime ụlọ ọrụ ahụ), Egosipụtala m iguzosi ike n'ihe na ịrụsi ọrụ ike mgbe niile n'ọrụ m. Can ga - ahụ site n’ọrụ m, nrara m na ọchịchọ m inye aka na mmepe obodo na ọkwa niile.
Ugbu a, mgbe (gosiputa afọ ole ọrụ dị na ụlọ ọrụ ahụ) na-eguzosi ike n'ihe n'ozi, enwere m afọ ojuju na ọrụ m. Sharedkpụrụ ndị a na-ekerịta n'ime ụlọ ọrụ ahụ kwekọrọ na nkwenye m ma adị m njikere inye aka karịa na ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ.
Agbanyeghị, enwere m nsogbu nke nsogbu, nke kwesịrị m itinye uche m niile. Ka m wee nwee ike itinye uche m niile n'ime ụlọ ọrụ ahụ wee gaa n'ihu na-arụ ọrụ ọfụma, ọ ga-adị m mkpa na tupu m edozie nsogbu a. N'ezie Kwuo nkenke banyere nsogbu a).
Inwe ike itinye ego zuru oke na idozi ọnọdụ a ma ọ bụ (ka m wee nwee ike ịgwọ onwe m nke ọma), M ga-akwụsịtụ ọrụ m n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ n’ihi nke a ka m ji na-ezitere gị arịrịọ a maka ịhapụ akwụ akwụghị ụgwọ. Nke a bụ oge m chọrọ (lekọta ọrịa m ma ọ bụ ọrịa nke onye ị hụrụ n'anya) ma ọ bụ (dozie ma ọ bụ dozie nsogbu ahụ n'ụzọ ziri ezi).
Ama m nke ọma na enweghị m ike ịkwụ ụgwọ ụdị nkwụghachi ụgwọ ụdị oge a. Na mgbakwunye, oge a agaghị atụle ka oge ọrụ dị irè nke ga-enyere m aka irite uru na ụbọchị ụgwọ ezumike. Na ngwụsị nke oge a, enwere m ike ịlaghachi n'ọnọdụ m ugbu a dị ka enyere maka koodu ọrụ.
Yabụ na ọnụnọ m anaghị akpata nsogbu ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ, ana m eme ya dịka iwu nke nka si dị, inyefe ya na onye ọrụ m ga-anọchi m. Ọzọkwa, ọ ga-amasị m igosipụta na faịlụ niile na-echere na ọkwa m ka aga-ahazi tupu m apụ.
Aghọtara m nke ọma na ịnweghị ọrụ gị iji zaghachi arịrịọ m. Agbanyeghị, enwere m ntụkwasị obi n ’ikpe gị ma enwere m obi ike na ị ga-aghọta ọnọdụ m.
Biko choo ihe ndi di n’akwukwo a gha enyere gi aka inyocha ihe m choro. N'ọnọdụ ọ bụla, anọ m n'aka gị maka ihe ọmụma ọ bụla ọzọ ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ ịchọrọ.
Ekele m gị maka mmasị gị n'arịrịọ m, biko nabata, Onye isi Madam, obi m niile na-akwanyere ugwu na ekele m.
Budata “ihe atụ dị njikere iji maka arịrịọ ezumike akwụghị ụgwọ”	ihe atụ-njikere-iji-maka-a-riọ-maka-ahapụ-enweghị-pay.docx – Ebudata ugboro 636 – 14 KB
Ihe atụ nke akwụkwọ ozi iji rịọ maka nhapụ akwụghị ụgwọ. Ọnwa Abụọ 13, 2022Tranquillus
gara agaOfdị ezumike dị iche iche, kedu mgbe ọ ga-eji mee ya?
-esonụIhe Need Kwesịrị Knowmara Banyere Nkeonwe